Multilingual Bible: Malagasy, Job 31
Malagasy, Job 31
1 Efa nampanekeko ny masoko; Koa hataoko ahoana indray no fijery zazavavy?
4 Moa tsy Andriamanitra va no mijery ny lalako ka manisa ny diako rehetra?
10 Dia aoka kosa ny vadiko halain'ny sasany, ary aoka olon-kafa no handry aminy.
20 Koa tsy nankasitraka ahy ny tenany, ary tsy nanafàna azy ny volon'ondriko;
23 Fa mampahatahotra ahy ny loza avy amin'Andriamanitra, ka tsy mahavita na inona na inona aho noho ny fahalehibiazany.
31 Raha tàhiny ny tao an-daiko tsy nanao hoe: Iza moa no tsy voky tamin'ny henany?
33 Raha tàhiny aho mba nanarona ny fahadisoako tahaka an'i Adama ka nanafina ny heloko tato an-tratrako,